Harder & Steenbeck vachangobva kuisa mari yakawanda kwazvo muzvivakwa zvavo zvekugadzira muNorderstedt, Germany. Matatu makuru makuru epamusoro-tech CNC michina gore rino haana kungowedzera zvakanyanya simba ravo rekugadzira, asi zvakare akazarura nzira nyowani dzekugadzira zvigadzirwa, nekusimudzira.
Iyo itsva CNC chigayo uye yekushandura michina inogadzirisa kare mamiriro e-iyo-iyo-mitambo iyo Harder & Steenbeck airbrushes inogadzirwa, nepo muchina mutsva wekupukutisa unogonesa kunyangwe kupera kuiswa kune zvikamu mushure mekugadzirwa.
Asi iyo unit iyo inopa kufarira kukuru kune Harder & Steenbeck vashandisi ndiyo nyowani CNC sindano muchina. Kugona kwemushini uyu kwave kureva kuti H&S inogona kuunza mazano matsva pakuumbwa uye kupera kweano tsono. Uye saka nerusununguko urwu rutsva, vakatanga kuongorora kuti vangave nani!
Chinangwa chekutanga, chaive icho munhu wese anoda kubva pane sindano - kuti ave akasimba! Midziyo mitsva iyi inogona kushanda pamwe nekugadzira zvimwe zvinhu zvinoshamisa, saka tsono tsono dzinogadzirwa kubva kune imwe zvinhu iyo inenge iri 1/3 yakaoma kupfuura yekutanga.
Uye zvakare, dhizaini… Zvakawanda zvakagadzirwa munguva pfupi yapfuura neasina "yakapepeta" sindano. Ichokwadi kuti masaputi maviri akapetwa masipi akakura pane rimwechete sindero. Nekudaro, kungova teki yakapetwa hakusi vimbiso yekubudirira. H & S akadzidza kuti nzvimbo iyo pendi "inoparura" kubva pane sindano ndiyo inonyanya kukosha. Zvekuita basa, apa ndipo panosangana vaviri mateki.
H & S yakaita chidzidzo kuburikidza ne 2018 ye taper kureba, ma angles uye kuti dhandi dhizaini shanduko pakati pemateki maviri. Mushure meazhinji prototypes, uye nguva yakawanda yaishandiswa uchishanda nevatambi, hunyanzvi hwakagadziriswa hwakagadzirwa hwese saizi kubva pa 0.15mm kusvika pa 0.6mm.
H&S yakatorawo mukana uyu kuita kuti chiratidzo chetsono panzvimbo yekumashure zvive nyore kunzwisisa, sezvaungaona mumifananidzo. Mazino manje anotakurawo nenzira imwechete iri nyore.
Mhinduro iri pane mutsono tsono ndizvo zvese izvo H&S yaive ichitsvaga - kudzora zvakanyanya pamusoro penyaya, mitsara yakajeka uye zvirinani zveatomisation kuburikidza neiyo trigger range. Ivo zvakare vasingachinjiki kumutsipa-wakaoma uye nekuda kwezvakaomesesa zvinhu uye dhizaini yakagadziridzwa, ivo vakasimba zvakanyanya kupfuura shanduro dzakapfuura.